ड्रागन फल (Dragon Fruit) खेती गर्नुहोस ! मनग्य आम्दानी लिनुहोस ! यो ड्रागन अर्थात सिउँडी प्रजातीको फल हो । यसको उत्पत्ती दक्षिण अमेरिकाको मेक्सीकोमा भएको पाईन्छ । दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरु भियतनाम फिलिपीन्स थाईल्याड लगायतको देश हुदै अहिले यो फल नेपालमा भित्रीएको छ ।
प्राविधिकका अनुसार रोपेको २ बर्षपछि ड्रागनबाट फल लिन सकिन्छ । नेपाली बजारमा १ हजार रुपैयाँ केजीसम्म यो फल विक्री भइरहेको छ। ड्रागनको एउटै बोटले धेरै वर्षसम्म फल दिइरहन्छ । यसको फल १ सय ५० ग्रामदेखि १ किलोसम्म हुने हँदा यसबाट मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ । यो खेती तराईदेखी उच्च पहाडी जमिन सम्म गर्न सकिन्छ । कारीब समुन्द्री सतह देखी 1800 मिटर सम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ । यस खेतिको लागी पानी आवश्यक नपर्ने हुँदा धेरै सुक्खा ठाउँहरुमा पनि यसलाईइ मज्जाले फलाउन सकिन्छ । यो फल मीठो मात्र छैन, औषधीय गुणले पूर्ण छ । यो फल खाएपछि पेट खलास हुन्छ र कब्जियतको दोष ठीक पार्छ । यो फलबाट उच्चस्तरको आइसक्रिम, इनर्जी ड्रिंक, वाइन र ब्रान्डी बनाउन सकिन्छ ।यसको मुन्टाको गजबको तरकारी बन्छ । फूल फुलेको ४५ दिनमा फल तयार हुन्छ । जो जेठदेखि असोज-कात्तिकसम्म फुलिरहन्छ र फलिरहन्छ ।
बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् : याग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.) काठमाडौं : चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज (Beside of Kundalini Durbar Banquet) 01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
From Agromart page